Nna nna Greta Thunberg ghọrọ onye chepụtara mmetụta griin haus na mbelata onu ogugu site na ihe omimi: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 18 November 2019	• 8 Comments
Ọ bụrụ na mmadụ enweta uche ya na mberede ma bụrụ kpakpando ịrị elu na ụwa, ihe a abụghị ya mere. Ọzọkwa n'ihe banyere ndị Sweden na ihu igwe na onye na-akwado gburugburu ebe obibi Greta Thunberg ọ dị ka nhazi dị mma ebularịrị nke a. Nne ya, Malena Ernman, meriri nke ikpeazụ maka ikere òkè na Sweden na Eurovision Song Contest na 2009 ma si otú ahụ bụrụ ihu a maara nke ọma, nke bara uru ma ọ bụrụ na nwa gị nwanyị dị ka gị ma mesịa ghọọ onye kpakpando ụwa. Nkwalite nzuzo a bidoro ebe ahụ. Can nwere ike ịza ajụjụ a ma nne Malena nwere ike ịbụ abụ nke ọma (lee ebe a). Agbanyeghị, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ karịa ịmụ ezinụlọ Thunberg ma ị ga-ahụ na isiokwu ndị a na - akpọ CO2, 'okpomoku ụwa' na 'mbelata ọnụ ọgụgụ mmadụ' sitere na otu ezinụlọ.
Greta Thunberg (amụrụ na 2003) dị ka Wikipedia si kwuo nwa nwanne abụọ nke dị anya nke Svante August Arrhenius. A na-akpọ nna ya Svante Thunberg, onye na-eme ihe nkiri aha ya na Svante Arrhenius. A na-ahụ Arrhenius dị ka onye ọkà mmụta sayensị mbụ ịkọwapụta ihe a na-akpọ mmetụta Arrhenius, mmụba sitere n'okike nke okpomoku ụwa site na mmụba nke mmiri na carbon dioxide (CO2) site n'oké osimiri n'ihi mbelata nke ntụgharị. O buru amụma na mmụba nke CO2 na ikuku na-akpata mmụba nke okpomọkụ ụwa. Dabere na ya, ịgbagha okpukpu abụọ nke CO2 ga-enwe njikọta okpomoku sitere na 4 ruo 6, nke sitere na anyanwụ kpatara n'ihi akụkụ 2 / 3e na CO1 maka akụkụ 3 / 2e. Ndị nchọpụta dị ka Keeling tụgharịrị nke a ka ọ bụrụ nsonaazụ griin haus kpatara CO2. So nwere ike ịsị na isiokwu ahụ dị n ’ezinaụlọ.
A mụrụ Svante Arrhenius na Gut Vik, na nso Uppsala, nwa Svante Gustav na Carolina Thunberg Arrhenius. Ọ dị ka Greta abụghị nwa nwanne nna dị anya, kama ọ bụ nwa nwa nwa. Wikipedia ekwughị na Svante Arrhenius n'onwe ya lụrụ otu Thunberg. Aha ya bụ Karolina Kristina Thunberg. Nke a pụtara ìhè site na nsonaazụ ọchụchọ a ka na-ahụ anya site na Google. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị pịa njikọ ahụ n'onwe ya, ọdịnaya ahụ yikọkwara myheritage.com ka idozi ya n’ihe metụtara ihe nchọta a ka na-egosi (lee nseta ihuenyo dị n'okpuru). O yiri ka a ga-ejikọrịrị ya na obere mkparịta ụka, ọ dịkwa ka aha Thunberg nwere ike jikọta onye guzobere okpomoku zuru ụwa ọnụ, Svante Arrhenius. Ọ bụkwa ihe ịtụnanya na ikekwe Svante lụrụ n’ezinụlọ (site na nne ya). Incdị mmekọ nwoke na nwanyị a bụ ihe anyị na-ahụ na bloodlines ochie dị mma (dịka akwụkwọ m akpọ). Agbanyeghị, ọ bụrụ na nsogbu dị na osisi nke ezinaụlọ, a gaghị enwe ike igosipụta nnabata ọ kwụ ọtọ ugbu a, mana njikọ ezinụlọ enweghị mgbagha.
Svante Arrhenius abuana na ihe omumu ihe omuma ma buru onye isi na ndi otu ndi Sweden Society for Racial Hygiene. Weebụsaịtị eugenicsarchive.ca kwuru ihe ndia banyere nka:
Arrhenius tinyere onwe ya na mmegharị eugenics site na isonye na Sweden Society for Racial Hygiene, otu lekwasịrị anya na nyocha na ịkwalite uru nke mmụba a na-achịkwa n'ime ụmụ mmadụ (Broberg & Roll-Hansen, 2005). E hiwere otu a na 1909 n'ime mbo iji gbasaa eugenics ma gbaa mgbanwe mgbanwe iwu iji kwalite eugenics (Bjorkman & Widmalm, 2010). Arrhenius abụghị naanị onye otu; ọ nọ na bọọdụ maka ọha mmadụ (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Otu a nyere okwu ihu ọha ma nyefee ọhaneze akwụkwọ pro-eugenic, mana n'ihi na iwu akwadoghị ha ka ha kpaa usoro ịmụ nwa ọ bụla, e chere na ndị otu ahụ nwere oke mmachi na mkpokọta (Broberg & Roll-Hansen, 2005).
Arrhenius sonyere na ngagharị nke eugenics site na ịghọ onye otu Society nke ịdị ọcha nke Sweden, otu lekwasịrị anya na nyocha na ịkwalite uru nke mmụpụta mmadụ na-achịkwa (Broberg & Roll-Hansen, 2005). E hiwere mkpakọrịta a na 1909 iji gbasaa eugenics ma gbaa mgbanwe mgbanwe iwu iji kwalite eugenics (Bjorkman & Widmalm, 2010). Arrhenius abụghị naanị onye otu; ọ nọ na bọọdụ nke mkpakọrịta (Broberg & Roll-Hansen, 2005). Njikọ ahụ nyere nkuzi ma kesaa ọha akwụkwọ pro-eugenic, mana n'ihi na iwu akwadoghị ịtụle usoro mgbochi afọ ọ bụla, a na-eche na ndị otu n'ozuzu nwere oke mmachi (Broberg & Roll-Hansen, 2005).
isi mmalite: artnet.com
Nwa nne nna Greta (nke echere) bụ ya mere oke ọnụ ọgụgụ ha dị elu. N'ihe gbasara 1900, Svante Arrhenius a sonyere na ntọala nke bellọ Akwụkwọ Nobel yana onyinye nrite Nobel metụtara. Na 1901 ọ nọ - n'agbanyeghị mmegide siri ike - hoputara onye otu Royal Royal Academy of Sciences. N'ime oge ndụ ya niile, ọ ga-abụ onye so na Kọmitii Nobel nke Physics yana onye so na Kọmitii Nobel nke Chemistry. O jiri ọmarịcha ọnọdụ ya hazie ndị enyi ya (Norte Prize) maka ndị enyi ya (Jacobus van 't Hoff, Wilhelm Ostwald na Theodore Richards) wee nwaa icheta ha n'aka ndị iro ya (Paul Ehrlich, Walther Nernst, Dmitri Mendeleev). Enwetara ya ihe nrite Nobel na 1903 ya mere n’ezie kwụọ onwe ya ụgwọ, maka na o tinyere aka ịtọlite ​​ụlọ ọrụ na-enye onyinye ahụ. Ya mere sayensị bụ ihe niile gbasara imelara mmadụ ihe, ọ bụghị banyere ọdịnaya.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na n'ọtụtụ akwụkwọ ka a tụlere na akụkọ okpomoku ụwa zuru oke bụ iguzobe gọọmentị ụwa na mbelata ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ. Edere m banyere nke ahụ n'isiokwu ikpeazụ m (lee ebe a). Na isiokwu a Onye mgbasa ozi Brandon Smith mekwara ka o doo anya na nkọwapụta sitere n'aka onye odeakwụkwọ UN sitere na 90 na-egosi na e mepụtara okpomoku zuru ụwa ọnụ iji menye ndị ụwa egwu ma tinye isi okwu. N’edemede ya o gosiputara n’ụzọ zuru ezu na ebumnuche ahụ bụkwa maka mbelata ọnụọgụ ndị mmadụ. Otu dị mma, a nwekwara ike ịchọta ya na ezigbo nna nna Greta (echere).
Yabụ ọ bụrụ na Greta Thunberg si n'ụlọ elu ahụ daa nke na anyị kwesịrị igekwu ntị na sayensị nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na CO2, ọ dị ugbu a na o yiri ka echiche ahụ sitere n'aka ya (o yikarịrị) nna nna nna ya na otu nna nna ochie ahụ. scammer bụ onye nyere onwe ya na ndị enyi ya onyinye Nobel. Nke ahụ na-ekwu maka otu esi agbagha ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị taa mgbe ha na-akatọ ọgụgụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ nke okpomoku ụwa n'ihi CO2.
N'ime akwụkwọ ọhụrụ m ị ga-enweta nkọwapụta nke aghụghọ na aghụghọ niile. Ọ na - egosikwa otu usoro nchịkwa ụwa ọhụụ ga - esi ruo ọkwa DNA na site na ntanetị kọmputa. Akwụkwọ a abụghị akwụkwọ David Icke, o nweghi ihe gbasara ya ma ọ bụ ihe ala adịghị mma. Akwụkwọ a, agbanyeghị, na-enye nchịkọta dị mkpa gbasara otu esi ahazi usoro mmemme na etu a ga-esi ghọta ha. N'ihi na enwere ike ịgụ akwụkwọ ahụ n'otu ụbọchị ma nwee usoro a na-ahụ anya, ọ dị mfe ikesara ndị ezinụlọ na ndị enyi. Oge eruola ka anyị mee ihe ma ya abụrụkwa oge ịkwalite akwụkwọ a. Also kwadokwara ọrụ m na ịzụta akwụkwọ ahụ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: myheritage.com, alt-market.com, eugenicsarchive.ca
Okwu Greta Thunberg UN bụ ihe ncheta nke "ụmụ a chụpụrụ na incubators" okwu na Iraq agha
Tags: sitere n'usoro ọmụmụ, gbadata, Arrhenius utịp, CO2, eugenics, agba, n'ihi na, Greta, Hygiene, Okike, Society, pedigree, Svante Arrhenius, Swedish, Thunberg
18 November 2019 na 13: 42
Ọ bụ komunizim niile n'ọnụ ụzọ dị n'azụ, ebe oke ma ọ bụ ihe fọdụrụ n'ime ya na-ahapụ njikwa / ike nye mmadụ ole na ole nwere obi ụtọ n'okpuru atụmatụ nke 'mgbanwe ihu igwe'.
Ọ bụ na ọ bụghị naanị olileanya maka mbara ala ndị mmepe obodo mepere emepe dara? Ọ bụ na ọ bụghị ọrụ anyị ime ka nke ahụ pụta? ”- Maurice Strong, onye nchoputa nke UN Environment Programme
“'Gburugburu' na-apụta ma ọ bụ mmepeanya anyị… ga-enwerịrị nsogbu nsonaazụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ikekwe ihe kachasị mkpa n'ime ha ga-abụ mgbanwe nwayọ nwayọ na ọkwa nke United Nations. N'ụzọ a na-apụghị izere ezere, ọ ga-enwerịrị akụkụ ụfọdụ nke ọchịchị ụwa. ”- Mikhail Gorbachev, State of the World Forum
Mgbe 'ọdịda nke Soviet socialism Gorbachev gụsịrị akwụkwọ na-enweghị ikike ruo n'ọchịchị nke ọchịchị kacha elu. N'oge nchịkwa Clinton o biri na Presidio na San Francisco *, na-efe efe n'ofe nke Knight nke Malta n'ụlọ obibi ya. Ọrụ ya na UN anọwo na-akwalite okpukpe ọhụrụ NWO "Green" nke UN kwadoro maka ọha mmadụ. Tinyere ihe odide ndị dị ka Maurice Strong na Al Gore, Gorbachev depụtara "Nkwekọrịta ụwa" bu n'obi dochie Iwu Iri ahụ.
18 November 2019 na 14: 46
18 November 2019 na 14: 47
Adam Weisshaupt nwekwara ezinụlọ ma ọ bụ akụkọ ụgha ahụ?
18 November 2019 na 14: 50
Thunberg bụ ezinụlọ a maara nke freemason. Onye nna nna nne ya bu onye okike ihe omuma (injinia na-elekọta mmadu) si uppsala nke nwere ihe jikọrọ ya na onye guzobere ìhè nke Bavarian Adam Weisshaupt.
Nke a bụ ka saịtị a si kọọ. M ga-edetu ya nwa oge, mana ọ nweghị ike ịchọta ya. N'ọnọdụ ọ bụla, aha ahụ na-apụta n'otu akwụkwọ ahụ, mana ma nke ahụ na-ekwu na ihe niile nwere ike bụrụ nke na-agaghị abanye.
18 November 2019 na 15: 00
Ee Gotha eo bụ ebe na - atọ ụtọ maka ụfọdụ ezinụlọ .. Saxe-Coburg na Gotha (windor), ị ga - ahụ ka ụzọ ahịrị si aga ọzọ ..
Ndi a ma ama yachtsman Boris Herrmann na Pierre Casiraghi, nwa nwa ma obu onye isi ndi Monaco Reneer III na omeere Grace Kelly ga-ejigide Malizia nke Abụọ. Akpọrọ ụgbọ mmiri a kwa, a na - akpọ Edmond de Rothschild, mgbe onye ụkọ ego na onye guzobere otu ụgbọ mmiri na-agba ụgbọ mmiri. Ihe owuwu ya na-efu elu ma ọ bụ € 4 nde.
nke ọma ndị ị na-enyo enyo, ị gaghị agbanahụ ya ...
18 November 2019 na 15: 08
ya mere gee ntị na ngwa ngwa Gotha a, kedu etu o si dị iche na nzụlite 😀 Purple Rain ma ọ bụ ọ bụ ọchịchị ọ bụla 😉
18 November 2019 na 15: 25
ma lee otu edemede si apụta na saịtị trollensite n'otu oge, iji dọghachi ihe ahụ niile na njakịrị ma jikwaa ọchụchọ ahụ:
Greta Thunberg bụ onye njem oge?
Mọnde, Nọvemba 18 2019 15: 04
18 November 2019 na 18: 44
Can nwere ike ịgwa site ugboro ole a na-ekerịta akụkọ dị ka nke a na ọnụọgụ ndị ọbịa na nke ikpeazụ anaghị ebili nke ukwuu karịa nkezi, nke bụ ihe na-egosi na Facebook na-ewepụ ya naanị (anaghị egosi na usoro ndị enyi). Ọ bụ ya mere enwere ike ọ bụla ma ọ nweghị onye nwere ike ịhụ ya. Nnwere onwe ikwu okwu, mana emesịa.
" UN manifesto '90 na-egosi: usoro amuma iji chebe gọọmentị ụwa
Nicky Verstappen Jos Brech bụ maka ịnabata nchekwa data DNA maka iso DNA gị nwee mmekọrịta n'ịntanetị »
Nleta nile: 14.397.367
Igwefoto dijitalụ n’ámá egwuregwu ndị China buru n’iru ihe ọha mmadụ?
Martin Vrijland op Nnukwu Sinterklaas na-akwalite: ọmarịcha ihe ịtụnanya mara mma!